Shan Su'aalood oo lagu Qiimeynayo Iibintaada iyo Iskuxirka Suuqgeynta | Martech Zone
Oraahdan ayaa runtii ila dhegtay usbuucii la soo dhaafay:
Ujeedada suuq geynta waa in laga dhigo iibinta mid aan faa iido laheyn. Ujeedada suuq geyntu waa in la ogaado oo la fahmo macmiilka si fiican in badeecada ama adeeggu ay isaga ku habboon tahay oo ay is iibiso. Peter Drucker
Iyada oo kheyraadku sii yaraanayaan iyo culeyska shaqadu uu kordhayo celceliska suuqleyda, way adagtahay in la ilaaliyo hadafka dadaalka suuqgeyntaada. Maalin kasta waxaan la macaamilnaa arrimaha shaqaalaha, duulaanka emayllada, waqtiyada kama dambaysta ah, miisaaniyadda… dhammaan dadka wax ka dhimaya waxa muhiimka u ah ganacsiga caafimaadka qaba.
Haddii aad rabto dadaalladaada suuq-geynta inay waxtar yeeshaan, waa inaad qiimeyn ku samaysaa barnaamijkaaga si joogto ah oo aad dusha ka saartaa sida kheyraadkaaga looga faa'iideysanayo. Halkan waxaa ah 5 su'aalood oo kaa caawinaya inaad kugu hoggaamiso barnaamij suuqgeyn wax ku ool ah leh:
Ma yihiin shaqaalaha la kulmaya macaamiishaada, ama maareeyayaashooda, ogyahay farriinta aad gudbinayso barnaamijka suuqgeyntaada? Waa lagama maarmaan, gaar ahaan macaamiishaada cusub, in shaqaalahaagu fahmaan rajooyinka la dejiyey inta lagu gudajiro suuq-geynta iyo iibinta. Ka dhaafida rajooyinka waxay ka dhigeysaa macaamiil farxad leh.
Ma yahay barnaamijkaaga suuq-geynta u fududeynta shaqaalahaaga iibka inay iibiyaan alaabtaada ama adeeggaaga? Haddii kale, waa inaad falanqeeysaa jidgooyooyin dheeri ah si aad macmiil ugu beddesho oo aad ku darto xeelado si aad uga gudubto.
Ma yihiin shaqsiyaad, koox iyo waax yoolalka ururkaaga oo dhan oo la jaan qaada dadaalka suuqgeyntaada ama khilaaf ka dhex jiraa? Tusaalaha guud waa shirkad dejiso yoolalka wax soosaarka ee shaqaalaha taas oo runtii yareyneysa tayada adeegga macaamiisha, taas oo markaa daciifinaysa dadaalka suuqgeyntaada.
Ma awoodaa inaad tiriso tirada soo noqoshada maalgashiga suuq geynta mid kasta oo ka mid ah xeeladahaaga? Qaar badan oo suuqleyda ah ayaa soo jiita walxaha dhalaalaya halkii ay ka cabbiri lahaayeen oo ay si sax ah u fahmi lahaayeen waxa shaqeynaya. Waxaan u janjeersanahay inaan shaqeyno annaga sida in la qabto halkii laga shaqeyn lahaa.
Ma dhistay a nidaamka khariidadaha xeeladaha suuqgeynta? Khariidad hawleedku waxay ka bilaabmaysaa kala-saarista rajooyinkaaga cabbir ahaan, warshadeed ama ilo source ka dibna qeexaya baahiyaha iyo diidmada mid kasta… ka dibna la hirgeliyo istiraatiijiyadda la cabbiri karo ee ku habboon si loogu celiyo natiijooyinka dhowr himilooyin oo dhexe.
Ku siinta faahfaahinta heerkan ah barnaamijkaaga suuq geynta guud waxay indhahaaga u fureysaa isku dhacyada iyo fursadaha ka dhex jira istaraatijiyadaha suuqgeynta shirkaddaada. Waa dadaal ay tahay inaad si dhakhso leh u qabato intii ka dambaysay!
Tags: isku xirkashaqaalahasuuq geynta gudahaisku waafajinta suuq geyntasuuq geynta iyo iibintaisku dhaca suuq geyntaisku waafajinta yoolka suuq geyntayoolalka suuqgeyntaistaraatijiyad marketingisku hagaajinta farriintaPeter Druckerxigasho peter druckerisku waafajinta iibkaiibinta iyo suuqgeyntaKordhinta Iibkaisku hagaajinta suuq geynta
Adeegsiga jQuery si aad Casiir uga Dhigto Bog Caadi ah
Inta badan Isticmaalayaasha ma jecla Isbedelka
Adiga oo ku hadlaya luuqadeyda. Weligey maan fahmin sababta aysan dadku usameynin wax socodsiin iyo habka ay jadwalku uunan geedisocod u ahayn. Nidaamyadu waxay shaqeeyaan illaa iyo inta la cusbooneysiiyey oo si joogto ah loo hagaajiyay. Dadku waxay isku dhiibaan si fudud iyagoo isku dayaya inay horumariyaan midna ceebteeda oo dhanna waa; Immisa fikradood oo wanaagsan ayaa ku halaagsamay geedi socod xumo darteed?
Qoraal wanaagsan! Gaar ahaan, markaad u fikirayso sida aniga oo kale! :)
Tani waa socod weyn oo loo maro geeddi-socod kasta oo suuq-geyn ah. Waxaan hadda eegay farsamooyin suuqgeyn cusub oo shirkadeyda ah mana lahan asal suuq geyn dhab ah. Balooggan ayaa aalad weyn ii ah.
Lambarka labaad wuxuu muhiim u yahay la kulanka himilooyinka iibka. Waxaan arkay meelo ay ugu yeedheen suuq-geyn, kooxda kahortaga iibka!
Hadalka Mr. Drucker, ixtiraam ahaan, waa waxoogaa maskax ah. Hadalku ma inuu noqdaa:
Ujeedada iibka, markaa, waxay noqon laheyd in suuq-geynta laga dhigo mid aan faa iido laheyn? Ujeedada iibku waa inay si wanaagsan ula xiriiraan macaamilka oo sheyga ama adeegga uusan u baahnayn in la suuq geeyo?
- Cidna kama dambayn